Sean Connery. Asingagumi James Bond uye vamwe vanyori vanyori | Zvazvino Zvinyorwa
Sean Connery akashaya apfuura Gumiguru 31 na 90 makore. Uyu mutambi weScotland, imwe yemifananidzo mikuru ye cinema wepanguva uye wepasi rose, aive nebasa chero bedzi raive rakakura uye rakamisikidzwa nemazita ezvinotove zvemubatanidzwa sinemaatographic memory. Dzakati wandei mavara vaidudzira vaive zvinyorwa, seyakamuunzira mukurumbira. James Bond. Saka ongororo iyi yavo yakakosha semutero.
2 Daniel Dravot - Murume Aigona Kutonga
3 Iyo Green Knight - Munondo weVakashinga: Iyo Nhoroondo yaSir Gawain uye iyo Green Knight
4 William weBaskerville - Zita reRose
5 Marko Ramius - Iyo Hunt yeRed Gumiguru
6 King Arthur - Wekutanga Knight
7 Alan Quatermain - Chikwata cheMamwe Anoshamisa
Connery ndiye wekutanga kuunza James Bond kuhupenyu, hunhu husingafi hwakagadzirwa naIan Fleming. Anotorwa nevazhinji kuve mutambi wepamusoro weanomiririra chakavanzika mumiriri ane mvumo yekuuraya. Kwandiri ichokwadi. Asi aive ne rudo hukama hwehukama neBond mushure memafirimu manomwe achipinda muganda rake.
007 inopesana naDr (1962)
Kubva kuRussia nerudo (1963)
Operation Kutinhira (1965)
Isu tinongorarama Kaviri chete (1967)
Madhayamondi nekusingaperi (1971).
Usati hazviitike (1983)
Daniel Dravot - Murume aigona kutonga
Kubva pane iyo pfupi pfupi namesake ye1888, yakanyorwa na Rudyard kipling, inoonekwa seimwe yeakanakisisa yazvinayo. Inotaurira nyaya yemaviri sMaBritish u-maofficial muIndia vanova madzimambo eKafiristan, chikamu chiri kure cheAfghanistan. Yakafuridzirwa nehupenyu hwevanhu vaviri chaivo venguva iyoyo.
John huston akatungamira iyo vhezheni yeiyo cinema mu 1975. Yairatidza Connery uye Michael Caine, avo kubvira ipapo vakave shamwari dzepedyo, kutamba vatambi vakuru mune imwe yeavo mafirimu mafirimu par kugona.
Iyo Green Knight - Munondo weVakashinga: Nhoroondo yaSir Gawain uye iyo Green Knight
Apa akauya chete aine zita rekuti Iyo Green Knight. Icho chaive chimwe chekuchinja kwakawanda kwakaitwa kweiyo nhetembo ine mukurumbira yechirungu medieval yemaArthurian tsika. Inotungamirwa na Stephen Weeks muna 1984, vanoisa nyeredzi mariri Miles O'Keeffe sa changamire gawain uye Sean Connery kufanana neGreen Knight.
William weBaskerville - Zita rerosi
Zvichida hunhu hwake hunonyanya kuzivikanwa uye hwakaombera maoko, pamwe nekuti iyi adapta mu 1986 kubva kumutungamiriri weFrance Jean Jacques Annaud yeiyi classic ye Umberto Echo ndeimwe yemafirimu anozivikanwa nguva dzese. Hapana munhu anogona kufungidzira anonyanya kuita mutikitivha muFranciscan friar mune iyi nyaya yematsotsi uye medieval obscurantism ane chimwe kumeso.
Marko Ramius - Kuvhima kweRed Gumiguru
Kugadziridza imwe yenano dze Tom Clancy, achitarisa muongorori wake anozivikanwa weCIA Jack Ryan, John McTiernan akatungamirirwa mukati 1990 imwe yeaya chiito uye kunetsekana mafirimu anofungidzirwa Sekondari hunhu (Mutungamiriri weRussia Marko Ramius) akafukidzwa chose kune protagonist uye anofungidzirwa gamba (Jack Ryan). Charisma yaConnery yakadzora yakanyorovera Alec Baldwin.
King Arthur - Yekutanga knight
Connery anga atove mune yekupedzisira cameo ya Robin Hood, muchinda wembavha (1991), kunyangwe yanga isina kubvumidzwa. Semakore apfuura anga ave a Twilight robin hood rinotevera Audrey Hepburn en Robin uye marian, iyo Richard Lester akatungamira mukati 1976.
Akatora Mambo Arthur, Ndinotodya protagonista, mune iyi yemahara vhezheni ine mimhanzi vhidhiyo aesthetic yaakatungamira Jerry zucker en 1995 game Richard Gere semugadziri Lanzarote, Julia Ormond kana Ben Cross.
Alan Quatermain - Chikwata cheMamwe Anoshamisa Vanababa
Waive bhaisikopo rekupedzisira iyo Connery akaitarisa mukati asati abva pamabhaisikopo. Akamutungamira Stephen Norrington, iyo yakatora chirevo kubva munhevedzano ye comics yakanakisa ye Alan Moore.
Connery akaridza mukurumbira mushanyi Alan Quartermain, kunogara hurumende yeChirungu, munguva dzeVictorian, iyo isingazive maitiro e chirongwa chedhiabhori chinangwa chavo ndechekutonga nyika. Saka vanosarudza kuhaya a timu yemagamba uye vafambi yemamiriro ese sachiremba Henry jekyll, Kaputeni the nemo, Vampire Mina harker o Dorian Grey.
Kugara mu pasticheAsi Connery yakaratidza kekupedzisira chikonzero nei kwaaive, sekutungamira kana basa rekutsigira, yaive chivimbo chekubudirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Noticias » Sean Connery. Eternal James Bond nevamwe vanyori vanyori
Iko kurova kwemoyo kwepasi